PA008 - OMG Angel Wing Shrill Personal Alarm ho an'ny vehivavy, ankizy, zokiolona, ​​mpiasa amin'ny alina | Vahaolana OMG
PA008 - OMG Angel Wing Shrill Personal Alarm ho an'ny vehivavy, ankizy, zokiolona, ​​mpiasa amin'ny alina
Alarm personnel: Ny ankizivavy na ny ankizivavy dia afaka manongotra ny kitapo rehefa mihaona amin'ny olona hafa izy ireo. Ny sifotra dia hampitahotra azy ireo.
Rehefa mamboly na miantsena miaraka amin'ny ankizy ianao, dia afaka mamela ny zanakao hitondra fanairana manokana, afaka mandre fanairana izy ireo rehefa very izy ireo mba hisorohana ny tsy hita.
Ity fanairana manokana ity koa dia mety ho an'ny lehilahy antitra voan'ny aretina mafy, afaka mamoaka ny fanairana izy ireo raha vao manafika izy ireo ary tsy afaka miteny.
Easy to carry-on: Afaka mifandray amin'ny finday, keychain, valizy sy kitapo.
Ny fomba fampiasana: Alefaso ny kitapo, hiantsoantso sy hitatra ny fanairana, ary hiverina indray any amin'ny fitoeran'entana, hijanona avy hatrany ilay feo. Ampifanaraho amin'ny tsindry amin'ny teboka na zavatra hafa ny kofehy eo amin'ny bolt, avy eo dia mampifanaraka ny andaniny roa amin'ilay alim-pitarihana mankany amin'ny kitapo na kitapo kely, rehefa hidina na hangalatra ilay telefaona, dia hivoaka ny bolt ary hipoitra ny fanairana.
Ny fampandrenesana Pretty Handy manokana dia iray amin'ireo ampaham-bidy haingana indrindra amin'ny fivarotana amin'ny indostrian'ny fiarovan-tena, satria ny fahavalo ratsy indrindra amin'ny mpanafika dia ny fifantohana. Ara-dalàna ny fanairana manokana alefa any amin'ny fanjakana 50 (na dia amin'ny fiaramanidina na any an-tsekoly aza!) Ary fomba fiarovana sy tena mahomby amin'ny fiarovana tena. Tsy mila fampiofanana na fahaiza-miasa izy ireo, ary azon'ny rehetra ampiasaina na iza na iza, na firy taona izy na fahaizany ara-batana. Ireo tompon'andraikitra polisy, mpanolotsaina momba ny fiarovana ny fiarovana sy fiarovana ao amin'ny Campus dia manome soso-kevitra ny fampiasana fanairana momba ny fiarovana manokana.
Io fanairana fanairana manokana io dia mety tsara ho an'ny tanora, mpikaroka amin'ny kolontsaina, andian-jatovo, mpiasa an-jatony, mpihazakazaka, zokiolona, ​​mpitsabo mpanampy / mpanolotsaina, mpanolotra / lalana mpiasa.
Product habe: 30 * 80 * 18mm
Longenan'ny tady: 60mm
Current working: 1 (mA)
Fiatrehana miasa: DC5 (V)
Boky ny: 90 (dB)
13309 Total Views 9 Views Today